Poppin News - News and Entertainment
အရှငျဝိသုတ- (ရစေကွို) Crd, original Uploader
အရမ်းကောင်းတယ်ဖတ်ပြီးရင် ရှယ်လိုက်ပါ အမေ့ကို အာခံ၍ပြန်မပြောခင်
တစ်ခုသော နံနက်ခင်းအထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်အားအိပ်ယာမသိမ်းမိလို့မိခင်ဖြစ်သူက”ထမင်းစားချိန်မှန်းလဲမသိအပြင်ထွက်လည်းမိဘဆီ ခွင့်မတိုင်ကြည့်စမ်း ဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲတစ်နေကုန် ဂိမ်းဆော့နေ. . .”အစရှိသဖြင့်ဆူပူကြိမ်းမောင်းကာသားဖြစ်သူကသီးမခံနိုင်လို့
“ဟာဗျာ…အမေကလည်းကျနော်က ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးတစ်နေ့လုံး ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်နဲ့နားငြီးတယ်…ကျနော့်ဟာ ကျနော် ကြိုက်သလိုနေပေါ့အမေမစပ်စုချင်ပါနဲ့…”လို့ သူ့အမေကိုအသံကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့ပြန်ပြောခဲ့တယ်…
အမေကတစ်လှည့်သားကတစ်လှည့်စကားများကြရာကအနီးအနားမှာထိုင်နေတဲ့အဖေဖြစ်သူကကြားပြန်ဖြေတဲ့အနေနဲ့သူ့သားကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။”သားရေ…အဖေ့ဆီလာပါဦးကွာ”သားဖြစ်သူကခြေဆောင့်ရင်းအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားပြီးအဖေခေါ်ရာကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်…အဖေဖြစ်သူကသားပခုံးကို လှမ်းဖက်ရင်းအပြင်ဘက်ကို လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
“သား..ဘာဖြစ်လို့အမေ့ကိုပြန်ပြောနေရတာလဲ””အဖေကလည်းကျနော်က ကလေးမှမဟုတ်တော့တာနေ့တိုင်းလိုလို ကျနော့်ကိုအပြစ်မြင်နေတယ်နေ့တိုင်း ဆူပူနေတယ်ကျနော် ဒီအိမ်မှာ မနေချင်တော့ဘူးဖေဖေရယ်”
“အော်..သားကမေမေ့ဆိုဆုံးမစကားတွေဆူတယ်လို့ထင်နေတာကိုးမေမေ မဆူအောင်မေမေ့ပြောတဲ့အတိုင်းငါ့သားနေပေါ့ကွ””ဖေဖေလည်း မေမေ့လိုပဲသားကို မချစ်ဘူးပေါ့ “”မဟုတ်ပါဘူးသားရယ်ဘယ်မိဘကမှ ကိုယ့်သားသမီးကိုလမ်းမှားမရောက်စေချင်ဘူးကြိုတင်တားဆီးတဲ့အနေနဲ့ပြောဆိုဆုံးမနေတာ”
“တော်ပြီ..ဖေဖေလည်းမေမေ့လိုပဲသားကို အကောင်းမမြင်ဘူးဆူဖို့ပဲ””ကဲ ဖေဖေတစ်ခုပြောမယ်သေချာနားထောင်””ဘာပြောမှာလဲဖေဖေသားနားထောင်နေတယ်””သားက မေမေ့ကိုတစ်ခွန်းမကျန်အာခံပြန်ပြောတယ်နော်သားသေချာစဉ်းစား”
“သား ပြန်ပြောမှာပေါ့ဖေဖေနေ့တိုင်း ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်ဆိုတော့ သား နားငြီးတယ်”ကဲ ဒါဆိုဖေဖေ အချက် ၁၀ ချက်ပြောပြမယ်အဲဒီအချက် ၁၀ ချက်လုံးသားလိုက်နာနိုင်ရင်သားမေ့မေ့ကို ကြိုက်သလိုအာခံပြီးပြန်ပြောလို့ရပြီ””ပြောပါ ဖေဖေ သားနားထောင်ပါ့မယ်””ဒါဆိုသေချာနားထောင်
၁။ သုံးလတိတိ သားထမင်းစားပြီးတိုင်းအန်နိုင်မလား ၊
၂။ သားရဲ့ဝမ်းဗိုက်ထဲဘောလုံးထည့်ပြီးကြီးမားလာအောင် တစ်လတစ်ခါရေထိုးသွင်းမယ် တစ်ဆယ်လတိုင်တိုင်သားအလေးခံပြီး သယ်ထားနိုင်မလား ၊
၃။ ကော်ဖီ ၊ လက်ဖက်ရည် ၊ကိုယ်ကြိုက်တဲ့မုန့် အစားအစာတွေမစားပဲ ခြောက်လတိုင်တိုင်အငတ်ခံနေနိုင်မလား ၊
၄။ ညညအိပ်ရင်လည်းဗယ်ညာ မစောင်းပဲငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့၅ လတိုင်တိုင် အိပ်နိုင်မလား ၊
၅။ ၈ လတိုင်တိုင်ဆော့ကစားတာတို့ လျှောက်လည်တာတို့ကခုန်တာတို့မလုပ်ပဲ အိမ်ထဲမှာပဲ နေနိုင်မလား ၊
၆။ နာဖျားလို့မရှိအောင်ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်နေရလို့ကြိုက်တဲ့အစားအသောက်တွေမစားပဲနေမယ်နာဖျားခဲ့ရင်တောင်ဆေးတွေစိတ်ကြိုက်စားခွင့်မရှိပဲ၁၀ လအထိ သားနေနိုင်လား ၊
၇။ ၁၄ နာရီအကြာအသက်နဲ့ရင်းပြီးနာကျင် ကိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာသားခံနိုင်မလား ၊
၈။ ကိုယ့်နို့သီးခေါင်းကိုကိုက်ရင်နာပေမယ့် ၁၀ လအထိ အောင့်အည်းသီးခံနိူင်မလား ၊
၉။ ချီးတွေ ၊ သေးတွေ ၊အန်ဖတ်တွေ ၂ နှစ်တိုင်တိုင်သားကကြုံးနိုင်မလား ၊
၁၀။ ညညဆိုရင်လည်းနှစ်နာရီတစ်ခါတစ်နှစ်လုံးလုံးအိပ်ရေးပျက်ခံပြီးထနိုင်မလား ။ကဲ…သား အဲဒီအချက်၁၀ ချက် လိုက်နာလို့နိုင်မလား…?
တစ်ကယ်လို့ သားကတစ်ချက်မကျန် လိုက်နာနိုင်ရင်မေမေ့ကို ကြိုက်သလိုအာခံပြီးပြန်ပြောလို့နိုင်ပြီ”သားဖြစ်သူက ခေတ္တမှိုင်ပြီးအတွေးတစ်ခုဝင်လာကာ”ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေသားနားလည်ပါပြီနောက်ဘယ်တော့မှမေမေ့ကိုရော ဖေဖေ့ကိုပါသားပြန်မပြောတော့ပါဘူးလို့သားကတိပေးပါတယ်ဖေဖေ”
“ကဲ..သားလိမ္မာလေးမေမေ့ကို ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးကန်တော့လိုက်နော် “သားလိမ်မာသမီးလိမ္မာလေးဖြစ်ကြပါစေ ။
ခရစ်ဒစ်_မူရင်းရေးသားသူ နဲ့ မူရင်းဖိုတို။
အရမျးကောငျးတယျဖတျပွီးရငျ ရှယျလိုကျပါ အမကေို့ အာခံ၍ပွနျမပွောခငျ
တဈခုသော နံနကျခငျးအထကျတနျးကြောငျးသားအရှယျကောငျလေးတဈယောကျအားအိပျယာမသိမျးမိလို့မိခငျဖွဈသူက”ထမငျးစားခြိနျမှနျးလဲမသိအပွငျထှကျလညျးမိဘဆီ ခှငျ့မတိုငျကွညျ့စမျး ဘယျအခြိနျရှိနပွေီလဲတဈနကေုနျ ဂိမျးဆော့နေ. . .”အစရှိသဖွငျ့ဆူပူကွိမျးမောငျးကာသားဖွဈသူကသီးမခံနိုငျလို့
“ဟာဗြာ…အမကေလညျးကနြျောက ကလေးမဟုတျတော့ဘူးတဈနလေုံ့း ဗဈြတောကျဗဈြတောကျနဲ့နားငွီးတယျ…ကနြေျာ့ဟာ ကနြျော ကွိုကျသလိုနပေေါ့အမမေစပျစုခငျြပါနဲ့…”လို့ သူ့အမကေိုအသံကွီးဟဈကယျြနဲ့ပွနျပွောခဲ့တယျ…
အမကေတဈလှညျ့သားကတဈလှညျ့စကားမြားကွရာကအနီးအနားမှာထိုငျနတေဲ့အဖဖွေဈသူကကွားပွနျဖွတေဲ့အနနေဲ့သူ့သားကိုချေါလိုကျပါတယျ။”သားရေ…အဖဆေီ့လာပါဦးကှာ”သားဖွဈသူကခွဆေောငျ့ရငျးအိမျပျေါကနဆေငျးသှားပွီးအဖခေျေါရာကိုလိုကျခဲ့ပါတယျ…အဖဖွေဈသူကသားပခုံးကို လှမျးဖကျရငျးအပွငျဘကျကို လမျးလြှောကျထှကျခဲ့ပါတယျ။
“သား..ဘာဖွဈလို့အမကေို့ပွနျပွောနရေတာလဲ””အဖကေလညျးကနြျောက ကလေးမှမဟုတျတော့တာနတေို့ငျးလိုလို ကနြေျာ့ကိုအပွဈမွငျနတေယျနတေို့ငျး ဆူပူနတေယျကနြျော ဒီအိမျမှာ မနခေငျြတော့ဘူးဖဖေရေယျ”
“အျော..သားကမမေဆေို့ဆုံးမစကားတှဆေူတယျလို့ထငျနတောကိုးမမေေ မဆူအောငျမမေပွေ့ောတဲ့အတိုငျးငါ့သားနပေေါ့ကှ””ဖဖေလေညျး မမေလေို့ပဲသားကို မခဈြဘူးပေါ့ “”မဟုတျပါဘူးသားရယျဘယျမိဘကမှ ကိုယျ့သားသမီးကိုလမျးမှားမရောကျစခေငျြဘူးကွိုတငျတားဆီးတဲ့အနနေဲ့ပွောဆိုဆုံးမနတော”
“တျောပွီ..ဖဖေလေညျးမမေလေို့ပဲသားကို အကောငျးမမွငျဘူးဆူဖို့ပဲ””ကဲ ဖဖေတေဈခုပွောမယျသခြောနားထောငျ””ဘာပွောမှာလဲဖဖေသေားနားထောငျနတေယျ””သားက မမေကေို့တဈခှနျးမကနျြအာခံပွနျပွောတယျနျောသားသခြောစဉျးစား”
“သား ပွနျပွောမှာပေါ့ဖဖေနေတေို့ငျး ဗဈြတောကျဗဈြတောကျဆိုတော့ သား နားငွီးတယျ”ကဲ ဒါဆိုဖဖေေ အခကျြ ၁၀ ခကျြပွောပွမယျအဲဒီအခကျြ ၁၀ ခကျြလုံးသားလိုကျနာနိုငျရငျသားမမေ့ကေို့ ကွိုကျသလိုအာခံပွီးပွနျပွောလို့ရပွီ””ပွောပါ ဖဖေေ သားနားထောငျပါ့မယျ””ဒါဆိုသခြောနားထောငျ
၁။ သုံးလတိတိ သားထမငျးစားပွီးတိုငျးအနျနိုငျမလား ၊
၂။ သားရဲ့ဝမျးဗိုကျထဲဘောလုံးထညျ့ပွီးကွီးမားလာအောငျ တဈလတဈခါရထေိုးသှငျးမယျ တဈဆယျလတိုငျတိုငျသားအလေးခံပွီး သယျထားနိုငျမလား ၊
၃။ ကျောဖီ ၊ လကျဖကျရညျ ၊ကိုယျကွိုကျတဲ့မုနျ့ အစားအစာတှမေစားပဲ ခွောကျလတိုငျတိုငျအငတျခံနနေိုငျမလား ၊
၄။ ညညအိပျရငျလညျးဗယျညာ မစောငျးပဲငွိမျငွိမျလေးနဲ့၅ လတိုငျတိုငျ အိပျနိုငျမလား ၊
၅။ ၈ လတိုငျတိုငျဆော့ကစားတာတို့ လြှောကျလညျတာတို့ကခုနျတာတို့မလုပျပဲ အိမျထဲမှာပဲ နနေိုငျမလား ၊
၆။ နာဖြားလို့မရှိအောငျကိုယျ့ကိုဂရုစိုကျနရေလို့ကွိုကျတဲ့အစားအသောကျတှမေစားပဲနမေယျနာဖြားခဲ့ရငျတောငျဆေးတှစေိတျကွိုကျစားခှငျ့မရှိပဲ၁၀ လအထိ သားနနေိုငျလား ၊
၇။ ၁၄ နာရီအကွာအသကျနဲ့ရငျးပွီးနာကငျြ ကိုကျခဲတဲ့ဝဒေနာသားခံနိုငျမလား ၊
၈။ ကိုယျ့နို့သီးခေါငျးကိုကိုကျရငျနာပမေယျ့ ၁၀ လအထိ အောငျ့အညျးသီးခံနိူငျမလား ၊
၉။ ခြီးတှေ ၊ သေးတှေ ၊အနျဖတျတှေ ၂ နှဈတိုငျတိုငျသားကကွုံးနိုငျမလား ၊
၁၀။ ညညဆိုရငျလညျးနှဈနာရီတဈခါတဈနှဈလုံးလုံးအိပျရေးပကျြခံပွီးထနိုငျမလား ။ကဲ…သား အဲဒီအခကျြ၁၀ ခကျြ လိုကျနာလို့နိုငျမလား…?
တဈကယျလို့ သားကတဈခကျြမကနျြ လိုကျနာနိုငျရငျမမေကေို့ ကွိုကျသလိုအာခံပွီးပွနျပွောလို့နိုငျပွီ”သားဖွဈသူက ခတ်ေတမှိုငျပွီးအတှေးတဈခုဝငျလာကာ”ဟုတျကဲ့ဖဖေသေားနားလညျပါပွီနောကျဘယျတော့မှမမေကေို့ရော ဖဖေကေို့ပါသားပွနျမပွောတော့ပါဘူးလို့သားကတိပေးပါတယျဖဖေေ”
“ကဲ..သားလိမ်မာလေးမမေကေို့ ဝနျခတြောငျးပနျပွီးကနျတော့လိုကျနျော “သားလိမျမာသမီးလိမ်မာလေးဖွဈကွပါစေ ။
ခရဈဒဈ_မူရငျးရေးသားသူ နဲ့ မူရငျးဖိုတို။
သင် ဟာ လက္ခဏာဗေဒင်ကို ဝါဿနာပါသူလား။ ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကို သိရမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြမှာပါ။
တစ်ချို့ဟောချက်တွေက မှန်တာတွေလည်းရှိသလို ၊ အချို့ဖြစ်မလာတဲ့ကိစ္စလေးတွေလည်းရှိပါတယ်..။
ယုံကြည်သူဖြစ်စေ ၊ မယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ ဒီလို လက်ဖဝါးမှာပါတဲ့ X ပုံစံလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ သိချင်သူများအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။
X ရဲ့အဓိပ္ပာယ် – ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ပြောပြချင်တာကတော့ မင်းဟာ ပြိုက်ဘက်ကင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။
အနာဂတ်မှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်မယ့် လက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ် …။
ရုရှား STI တက္ကသိုလ်မှပညာရှင်များ လေ့လာချက်အရ လူတွေရဲ့လက္ခဏာဖွဲ့စည်းပုံဟာ ရှုပ်ထွေးပေမယ့်
များသောအားဖြင့် ဒီလို Xပုံစံပါတဲ့ လူတွေဟာ ပြိုင်စံရှားဖြစ်သလို အထင်ကရလူတွေအဖြစ်လည်း မြင်တွေ့ရပါတယ် …။
ဒီလူတွေဟာ စိတ်ဓာတ်မာကြောပြီး တိတ်တဆိတ် နေတတ်ကြပါတယ်။ဒီလူတွေမှာ ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အင်အားတွေအများကြီးပါဝင်နေတာကို တွေ့ရတယ် …။သူတို့ဟာသေသွားရင်တောင် နာမည်တွင်ကျန်ခဲ့မယ့် လူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲ အမြဲတမ်း စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတတ်ပြီး တစ်ဖက်သားကလွယ်လွယ်နဲ့လာလိမ်တာမျိုးဆိုလည်း သိနှင့်နေတတ်ပါတယ်
ဆဌမအာရုံသိပ်ကောင်းပြီး အနီးမှာအန္တရာယ်တစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း ကြိုတင်သိနေနိုင်တယ်။
အမှန်ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာအားစိုက်မှုများတာပါ။ကိုယ့်ဘဝကိုယ် မြှင့်တင်နေနိုင်သူတွေဖြစ်ပြီး အနားရှိလူတွေကိုလည်း လက်တွဲကြိုဆိုပြီး ပညာတွေပြန်လည် မျှဝေပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်
ပြောပါဦး…စာဖတ်သူများဆီမှာရော ဒီလို X ပုံစံပါနေရဲ့လား ။ ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ မင်းဟာ ကံကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတော့ ဂုဏ်ယူလိုက်ပါနော် …။ ။
ယခု မေလအတွက် ထီကံအရမ်းကောင်းသူများ ဖြစ်ပါတယ် ထီထိုးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။
သငျ ဟာ လက်ခဏာဗဒေငျကို ဝါဿနာပါသူလား။ ကိုယျ့ရဲ့အနာဂတျအကွောငျးကို သိရမယျဆိုရငျလူတိုငျးစိတျဝငျစားကွမှာပါ။
တဈခြို့ဟောခကျြတှကေ မှနျတာတှလေညျးရှိသလို ၊ အခြို့ဖွဈမလာတဲ့ကိစ်စလေးတှလေညျးရှိပါတယျ..။
ယုံကွညျသူဖွဈစေ ၊ မယုံကွညျသညျဖွဈစေ ဒီလို လကျဖဝါးမှာပါတဲ့ X ပုံစံလေးရဲ့
အဓိပ်ပာယျကိုတော့ သိခငျြသူမြားအတှကျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော …။
X ရဲ့အဓိပ်ပာယျ – ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့ ပွောပွခငျြတာကတော့ မငျးဟာ ပွိုကျဘကျကငျးတဲ့ လူတဈယောကျဖွဈတယျ။
အနာဂတျမှာ ခေါငျးဆောငျကောငျးတဈယောကျဖွဈမယျ့ လက်ခဏာ ဖွဈပါတယျ …။
ရုရှား STI တက်ကသိုလျမှပညာရှငျမြား လလေ့ာခကျြအရ လူတှရေဲ့လက်ခဏာဖှဲ့စညျးပုံဟာ ရှုပျထှေးပမေယျ့
မြားသောအားဖွငျ့ ဒီလို Xပုံစံပါတဲ့ လူတှဟော ပွိုငျစံရှားဖွဈသလို အထငျကရလူတှအေဖွဈလညျး မွငျတှရေ့ပါတယျ …။
ဒီလူတှဟော စိတျဓာတျမာကွောပွီး တိတျတဆိတျ နတေတျကွပါတယျ။ဒီလူတှမှော ကမ်ဘာကွီးကိုပွောငျးလဲနိုငျဖို့အငျအားတှအေမြားကွီးပါဝငျနတောကို တှရေ့တယျ …။သူတို့ဟာသသှေားရငျတောငျ နာမညျတှငျကနျြခဲ့မယျ့ လူတှဖွေဈပါတယျ။
ပတျဝနျးကငျြမှာ ဘာတှဖွေဈပကျြနလေဲ အမွဲတမျး စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာနတေတျပွီး တဈဖကျသားကလှယျလှယျနဲ့လာလိမျတာမြိုးဆိုလညျး သိနှငျ့နတေတျပါတယျ …။
ဆဌမအာရုံသိပျကောငျးပွီး အနီးမှာအန်တရာယျတဈခုခုဖွဈတော့မယျဆိုရငျလညျး ကွိုတငျသိနနေိုငျတယျ။
အမှနျကတော့ ပတျဝနျးကငျြကိုလလေ့ာအားစိုကျမှုမြားတာပါ…ကိုယျ့ဘဝကိုယျ မွှငျ့တငျနနေိုငျသူတှဖွေဈပွီး အနားရှိလူတှကေိုလညျးလကျတှဲကွိုဆိုပွီး ပညာတှပွေနျလညျ မြှဝပေေးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ …။
ပွောပါဦး…စာဖတျသူမြားဆီမှာရော ဒီလို X ပုံစံပါနရေဲ့လား ။ ရှိနတေယျဆိုရငျတော့ မငျးဟာ ကံကောငျးတဲ့လူတဈယောကျ ဆိုတော့ ဂုဏျယူလိုကျပါနျော …။ ။
ယခု မလေအတှကျ ထီကံအရမျးကောငျးသူမြား ဖွဈပါတယျ ထီထိုးဖို့မမပေ့ါနဲ့နျော။